I-Tubing Factory - i-China Tubing Manufacturers, abahlinzeki
Ukugcwalisa Uketshezi Futhi Umshini Wokufaka uphawu HGS-118 (P5)
IMicro Plunger Pump MP12.5-1A
Idizayinelwe ukusetshenziswa kokuhlanzeka okuphezulu, i-Huiyu Silicone Tubing's bore-bore bore bore yangaphakathi inganciphisa ubungozi bokufakwa kwezinhlayiyana nokwakhiwa okuncane kakhulu ngesikhathi sokudluliswa kuketshezi olubucayi. Ukuhlaziywa kwangaphakathi kwendlu kwangaphakathi kweSanitary Silicone Tubing kuqhathaniswa nezinye izigaxa ze-silicone kukhombisa ukuthi bushelelezi kathathu. Ngokwengeziwe, le ndlela eshelelayo yoketshezi yenza kube lula ukuhlanzwa kohlelo nokuvala inzalo. Kusetshenziswa inqubo yokwelapha nge-platinum, i-Huiyu Sanitary Silicone Tu ...
Isingeniso nezici eziyinhloko i-Viton® fluoroelastomer hose Viton material yi-100% Pure - ukusebenza okuphezulu kwenjoloba yokwenziwa; Ukumelana nokushisa okuhle kakhulu: -40 ° F esimeme emazingeni okushisa we-400 ° F, amazinga okushisa angena ku-600 ° F; Iyakwazi ukumelana nesixazululo namakhemikhali ebanzi kakhulu kunanoma iyiphi injoloba yokuhweba; Ukubekezelela okuhle kakhulu kwamafutha ahlukahlukene, okokubasa, okokuthambisa, kanye nama-acid amaningi; I-VITON fluorine hose rubber ingamelana nama-aliphatic amaningi nephunga ...
Isingeniso nezici ezisemqoka iTygon # R-3603 amathuluzi okuhlaziya amakhemikhali hose Amelana cishe nakho konke okusetshenziswa kakhulu kumakhemikhali wezinto zaselabhorethri; Okuthambile, okusobala, nokulula ukuguga okuhlanganayo, ukuqina komoya kunethubhu yenjoloba; Ukumelana nokushisa okushisayo okuhle kakhulu, ukuze kusetshenziswe ku -43 ℃ kusalokhu kugcina ukuguquguquka; Ingasetshenziswa njenge-condenser, incubators, trachea, namanye amapayipi wokukhipha elebhu kanye ne-peristaltic pump tubing. Incazelo ye-ID yenombolo ye-Tube (mm) Wall t ...
Isingeniso nezici eziyinhloko ze-PharMed® peristaltic pump hose izithako zebhayoloji, ucwaningo lweseli olusetshenziswa isikhathi eside ngepompo ye-peristaltic, impilo ende kune-silicone tube izikhathi ezingama-30; Kungaphindaphindwa kwenzalo ye-autoclave; Ngokuhambisana namazinga we-United States USP Class VI, FDA kanye ne-NSF; Ukungahambelani kwayo phezulu kumazinga we-ISO10993; Ukuqina kuqine izikhathi ezingama-60 kuneshubhu lesilicone. Incazelo ye-ID yenombolo ye-Tube (mm) ukujiya kodonga (mm) Ikhanda lepompo elifanelekile M / iphakethe Pha ...
Isingeniso nezici ezisemqoka I-Norprene®Chemical hose Inokumelana okuhle kwamakhemikhali nempilo ende yokusebenza kwe-Teflon udonga lwangaphakathi lwe-hose material, indawo ebushelelezi, engenawo ama-plasticizers, anti-liquid adsorption, akukho ukumunca; Isendlalelo sangaphandle sezinto ezihlala isikhathi eside zokugqoka, silungele ama-acid, i-alkalis, utshwala, amaketoni nokunye ukulethwa oketshezi okonakalisayo. Incazelo ye-ID yenombolo ye-tube (mm) Ubukhulu be-Wall (mm) Iphampu efanelekayo M / Iphakheji Norprene®Chemical 16 # ...
Isingeniso nezici eziyinhloko i-Fluran®F-5500-Ipayipi eliqinile lokumelana nokugqwala; Ukumelana nama-acid amaningi, ama-alkalis, okokubasa, izixazululi zezinto eziphilayo; Ukusetshenziswa kwesikhathi eside endaweni ephezulu engu-204 ℃; Iphikisana kakhulu ne-ozone nokumelana nesimo sezulu; ukuqina, ukuguquguquka okuhle kakhulu, kuhle ukuhambisa imithombo yezindaba ebhubhisa kakhulu nge-peristaltic pump tubing. Incazelo ye-ID yenombolo ye-Tube (mm) Ukujiya kodonga (mm) Ikhanda lepompo elifanelekile M / iphakethe Fluran®F-5500-A 16 # 3.1 ...